केकीले बोलाइनन् की बेनिशा आँफै गइनन् केकीको विबाहमा ? – Sandes Post
April 25, 2022 828
सुन्दरी नायिकाहरु केकी अधिकारी, रीमा विश्वकर्मा र बेनिशा हमाल एकअर्कका मिल्ने साथी हुन् । सुखमा होस् वा दुखमा यी ३ सुन्दरीहरु एकैसाथ देखिन्थे । फिल्म ‘स्वर’बाट फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू गरेका यी ३ सुन्दरीहरु अन्तरवार्तमा समेत बेला बेला एकसाथ आउँथे ।
फिल्मी क्षेत्रको संघर्ष, उतारचढावकाबिच रीमा र बेनिशा औषत चल्दा केकी बढी चलिन् । समयक्रमसँगै केकी अहिले पनि चलिरहँदा रिमा र बेनिशा भने खासै चल्न सकेनन् । बेनिशा त विस्तारै हराउँदै नै गइन् ।
तर, यी तिन नायिकाको मित्रतामा भने ब्रेक लागेन । प्रायः यी तिन नायिकाहरु एकसाथ देखिँदै आएका थिए । तर, नायिका अधिकारीको बिहेमा बेनिशा छुट्न पुगेकी छिन् ।
सुटुक्क गरिएको विबाहमा बेनिशा छुट्दा गर्दा रीमा विश्वकर्मा भने अटाएकी छिन् । केकी र रिमा कएकसाथ देखिँदा कहाँ गइन् बेनिशा ?
यो पनि : संगीतकार कालीप्रसाद ३१ वैशाखमा क्लब प्लाटिनममा गुञ्जिने : गायक, गीतकार तथा संगीतकार कालीप्रसाद बासकोटा यही वैशाख ३१ गते अर्थात मे १४ मा दरबारमार्गको क्लब प्लाटिनममा गुञ्जिने भएका छन् । ‘कालीप्रसाद बासकोटा लाइभ’ नाम दिइएको कार्यक्रमको प्रस्तुतकर्ता पोजेटिभ भाइब्स इन्टरटेनमेन्ट (पीभीइ) नेटवर्क हो ।
पीभीइ नेटवर्कका अनुसार विशेष डिजाइनमा तयार पारिएको लाइट, साउण्ड, एलइडी स्क्रिनमा काली सुनिनेछन् । कार्यक्रममा अन्य कलाकारहरुको आकर्षक नृत्य प्रस्तुति पनि हुनेछ ।
कालीका अनुसार कोभिड महामारीपछि काठमाडौंमा उनको यो पहिलो प्रस्तुती हुनेछ । उनले गाएका गीतहरु ‘जालमा’, ‘निर’, ‘साली मन पर्यो’लगायत लोकप्रिय छन् । काली केही समयअघि सम्पन्न गायन रियालिटी शो ‘सा रे ग म प’को निर्णायकसमेत हुन् । यसबाहेक उनले ‘नेपाल आइडल’को सिजन १, २ र ३ मा पनि निर्णायकको भूमिका निभाइसकेका छन् ।
Prevके इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउन लाइसेन्स चाहिन्छ ?
Nextदुखद खबर ! युवालाई यसरी कतारमा फाँ सी,छोराछोरी र श्रीमतीको यस्तो बे हाल (भिडियो हेर्नुस्)